तपाईको बच्चा कस्तो बनाउनुहुन्छ ? - Paschimnepal.com
तपाईको बच्चा कस्तो बनाउनुहुन्छ ?
बालबच्चालाई हामी भन्छौ, ‘तिमी ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ, फलानो जस्तै ।’ कसैले भेट्नसाथ बालबालिकालाई सोध्ने प्रश्न पनि उही हो, ‘ठूलो भएपछि के बन्छौ ? कस्तो बन्नेछौ ?’ अक्सर हामी उनीहरुको दिमागमा यो कुरा भरिदिन्छौ कि, उनले ठूलो मान्छे बन्नुपर्नेछ । ठूलो कस्तो ? हामी उदाहरणसहित भनिदिन्छौ, ‘मार्क जुकरबर्ग जस्तो, बिल गेट्स जस्तो ।’ गौतम बुद्ध, महात्मा गान्धी, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो यस्तै-यस्तै नाम दिन्छौ ।
बच्चा कस्तो बन्ने त ?
महात्मा गान्धी जस्तो कि मार्क जुकरबर्ग जस्तो ? बच्चाले कुन आदर्श रोज्ने ? कसलाई पच्छ्याउने ? को जस्तो हुने ?
वास्तवमा हामीले यसरी ‘फलानो जस्तो बन्नुपर्छ’ भन्नु नै गलत छ । त्यसले बच्चालाई प्रेरित भन्दा बढी दबाव दिन्छ । दबावले तनाव । हाम्रा बच्चाहरु दिमागमा त्यही कुरा भरेर हिँड्छन् कि, भोलि मैले फलानो जस्तो बन्नुछ । अतः हामी सोध्छौ, ‘भविष्यमा तिमी के बन्छौ ?’
छोराछोरी के बन्न चाहन्छन् ?
हामी सोध्दैनौ, भोलि तिमी के बन्न चाहन्छौ ?
जस्तो, म आफ्नो बच्चालाई चिकित्सक बनाउन चाहन्छु । आफ्नो बच्चा चिकित्सक हो भनेर गर्व गरेर हिँड्ने सपना देख्छु । आफन्त-इष्टमित्रलाई भन्छु पनि, ‘मेरो बच्चा चिकित्सक बन्नेछ ।’
तर, बच्चालाई विज्ञानमा रुची नहुन सक्छ । उनको क्षमताले पनि नभ्याउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी निरास हुनपुग्छौ । छोराछोरीले आफ्नो इच्छा पुरा नगरिदिएकोमा खिन्न हुन्छौ । के यसमा बलबच्चाको गल्ती छ ?
बच्चा के बन्न चाहन्छन् ? उनको रुची के छ ? आमाबुवाले बुझ्नैपर्ने कुरा यही हो । बच्चाहरुको आफ्नै रुची हुन्छन् । उनीहरुले जुन कुरामा रुची राख्छन्, त्यसैलाई मलजल गरिदिने काम हाम्रो हो । कुनैपनि क्षेत्र आफैमा कमसल र कमजोर छैनन् । बच्चा एउटा शिक्षक बन्न चाहन्छ, फुटबलर बन्न चाहन्छ, कलाकार बन्न चाहन्छ । यो उनको आफ्नो रुचीका क्षेत्र हुन् । जुन क्षेत्रमा उनीहरुको रुची हुन्छ, त्यही क्षेत्रमा उनीहरुको भविष्य सुनौलो हुन्छ ।
हरेक क्षेत्रमा आफ्नै संभावना हुन्छन् । कुनैपनि क्षेत्र सानो वा ठूलो हुँदैन । महान र कमसल हुँदैन । उक्त क्षेत्रमा तपाईं कसरी काम गर्नुहुन्छ ? त्यो चाहि महत्वपूर्ण हो ।
हुन त बच्चालाई हामी यस्ता कुरा किनपनि सिकाउँछौ भने, उनीहरुले ‘ठूलो हुने लक्ष्य राखिदियोस् ।’ ठूलो, असल वा महान् । यसले गर्दा उनीहरु पथभ्रष्ट हुँदैनन् । लक्ष्य राख्नु पक्कैपनि राम्रो हो । जब उनीहरुले लक्ष्य निर्धारण गर्छन्, तब उनीहरु दायाँ-बायाँ लाग्दैनन् । आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर खटिन्छन् । मेहनत गर्छन् । संघर्ष गर्छन् । यसले उनीहरुलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्न पनि सिकाउँछ ।
तर, लक्ष्य कसरी तय गर्ने ? लक्ष्य निर्धारणका आधार के हुन् भन्ने कुरा अभिभावकलाई थाहा हुनुपर्छ । आमाबुवाले नै बच्चाका लागि लक्ष्य तय गरिदिने होइन । फलानो जस्तो बन भनिदिने होइन ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख २२, २०७६ 6:22:40 PM
Prevगुगलको नयाँ अपरेटिङ्ग सिस्टम, के के छन् फिचर्स ?
Nextविराटको क्रस अनुष्का थिइनन्